ခရစ္စမတ်အလှဆင်ခြင်း | ဖယ်ရှားပြီးနောက်အလှဆင်ရန်စိတ်ကူးများ လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း, အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ဆောင်းပါးတွင် အကြံဥာဏ်ငါးခုကို ဖော်ပြပါမည်။ ခရစ္စမတ်အလှဆင်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အလှဆင်. ခရစ္စမတ်အဆုံးတွင် ဤအပိုင်းအစများ၏ ပုံမှန်အလှဆင်မှုများကို ဖယ်ထားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စင်များ သို့မဟုတ် စားပွဲများသည် အနည်းငယ်ဗလာဖြစ်နေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အလှဆင်ခြင်းကို အသစ်ပြုပြင်ရန် သင့်အား အကြံဉာဏ်အချို့ပေးပါသည်။
1 အလှဆင်ခြင်းစိတ်ကူးနံပါတ် 1- အလှဆင်ရန် လိမ္မော်ခြောက်အချပ်များ။
2 နံပါတ်2စိတ်ကူးအလှဆင်ခြင်း- Macramé မှန်
3 နံပါတ်3စိတ်ကူးအလှဆင်ခြင်း- ပီစတာချီယိုခွံများဖြင့် ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ
4 အလှဆင်ခြင်းစိတ်ကူးနံပါတ် 4- Pom pom ပန်းကုံး
5 နံပါတ်5ကို အလှဆင်ရန် စိတ်ကူး- ရိုးရိုး rustic boho ပန်းချီ
အလှဆင်ခြင်းစိတ်ကူးနံပါတ် 1- အလှဆင်ရန် လိမ္မော်ခြောက်အချပ်များ။
ယခု လိမ္မော်သီးသည် ရာသီပေါ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့် အလှဆင်ရာတွင် အသုံးပြုရန် ဤအသီးကို အခြောက်လှန်းရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ်သီးတွေ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ ပန်းကန်တွေ အပြည့်နဲ့ လှေတွေကို လုပ်လို့ရတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဤလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ လိမ္မော်ရောင်အချပ်များကိုအခြောက်ခံအလှဆင်ပါ
နံပါတ်2စိတ်ကူးအလှဆင်ခြင်း- Macramé မှန်
အိမ်မှာ မှန်အဟောင်းတစ်လုံးရှိလို့ အလှဆင်ပြီး နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားလို့ ရပါတယ်၊
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဤလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Macrame မှန်
နံပါတ်3စိတ်ကူးအလှဆင်ခြင်း- ပီစတာချီယိုခွံများဖြင့် ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ
ဤစိတ်ကူးဖြင့်၊ လှပပြီး မူလပုံစံဖြင့် အလှဆင်ခြင်းအပြင်၊ ကြွယ်ဝသော သစ်သီးခြောက်များ၏ အခွံများကို ပြန်လည်အသုံးပြုပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဤလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ pistachio ခွံပါတဲ့ဖယောင်းတိုင်
အလှဆင်ခြင်းစိတ်ကူးနံပါတ် 4- Pom pom ပန်းကုံး
ခရစ္စမတ်ဗဟိုချက်မများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် အလှဆင်ရန် ယခုကျွန်ုပ်တို့ ဘာကို ထားနိုင်သည်ကို အံ့သြမိသည်မှာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် pompoms နှင့်မီးများပါသောဤစိတ်ကူးသည်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဤလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Pompom ပန်းကုံး
နံပါတ်5ကို အလှဆင်ရန် စိတ်ကူး- ရိုးရိုး rustic boho ပန်းချီ
ဤပန်းချီကားသည် စင်ပေါ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် နံရံပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲခြင်း နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။ သင်အလိုချင်ဆုံး geometric ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဤလက်ရာကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နည်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ လွယ်ကူသောအလှဆင် boho ပန်းချီကား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ » ခရစ္စမတ်အလှဆင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်အလှဆင်ဖို့စိတ်ကူးများ
ဖော့များဖြင့် အလှဆင်ရန် လက်မှုပညာများ
ကတ်ထူပြားနှင့် ကတ်ထူပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရယ်စရာလိပ်ပြာများ